Ianaro ny fitaovana fampifangaroana ao amin'ny Adobe Illustrator | Famoronana an-tserasera
Adobe Illustrator: Fangaro fitaovana
Judit Murcia | | maro
Misy fitaovana Illustrator izay afaka manome lalao maro antsika raha fantatsika izany, iray amin'izany Fusion.
Araka ny asehon'ny anarany dia hamela antsika hiaraka amin'ny làlana izy. Azontsika atao ny manitsy ny isan'ny fotoana averina, ary noho izany ny valiny farany. Misy fika sy safidy isan-karazany, amin'ity lahatsoratra ity dia afaka mahita ny sasany amin'izy ireo isika.
1 Mamorona fifangaroana tsotra miaraka amin'ny Illustrator
2 Asio loko mba afangaro
3 Halavirana voatondro
Mamorona fifangaroana tsotra miaraka amin'ny Illustrator
Voalohany indrindra, hianarantsika ny fanaovana fusion tsotra mba hahafantarantsika ny fomba fiasan'izy io. ny dingana tokony harahina dia toy izao:
Manokatra ny programa izahay ary manao tsipika miaraka amin'ilay fitaovana borosy.
Averinay ny laharana ary apetrakay eo amboniny.
Safidintsika ireo kapoka roa.
Mandeha amin'ny menio ambony izahay: Object - Fusion - Mamorona.
Hovonoina ho azy ireo tsipika. Izany hoe, eo anelanelan'ny tsipika roa voalohany, haverina ny lalan-dra. Ny dingana manaraka dia ny manapa-kevitra impiry no tadiavintsika ny hamerenana azy. Raha hiantsoana ny laharana isika dia tsy maintsy manaraka ity làlana ity: Safidy - Fusion - Safidy fusion.
Hiseho ny varavarankely izay hijerenantsika ny safidy "Dingana voatondro" izay ahafahantsika manamarika ny isa marina tadiavintsika. Satria tsy dia manana fanazaran-tena firy izahay dia afaka manamarika ny safidy "preview" hahitana ny valiny farany.
Asio loko mba afangaro
Azontsika atao ny milalao ny loko ampiharintsika amin'ny fusion, izany hoe ny safidy iray dia ny fametrahana loko isan-karazany amin'ireo tsipika mamorona gradien-loko. Andao jerena ny ohatra hita maso mba hahatakarana an'ity hevitra ity.
Safidy iray hafa avelan'ity fitaovana ity hanapa-kevitra la elanelana tianay ampiharina eo anelanelan'ny tsipika sy ny tsipika. Miankina amin'ny vokatra tadiavintsika na mifanaraka indrindra amin'ny volavolantsika, io safidy io dia ho lakilen'ny fanatanterahana vokatra tsara indrindra.
Ny fampiharana ity fitaovana ity dia tsy misy farany, tsy maintsy ampiharintsika ny fahaiza-mamorona hitrandrahana azy. Izy io dia fitaovana mety hanampiana ny halalin'ireo zavatra. Mba hanomezana aingam-panahy anao, dia asehonay hevitra vitsivitsy izay hanome fikitika manokana ny volanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Adobe Illustrator: Fangaro fitaovana
Mpanazava, mamorona afisy mahavariana amin'ny fomba tsotra
Boky fampianarana marika, andao hojerentsika hoe inona izany
JEREO IZAY MANASA